जनयुद्ध दिवसमा नेकपाले गरेको कार्यक्रममा किन गएनन् ओली? -
जनयुद्ध दिवसमा नेकपाले गरेको कार्यक्रममा किन गएनन् ओली?
१ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ११:२१ 207 पटक हेरिएको
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीले आयोजना गरेको जनयुद्ध दिवसमा अनुपस्थित भएका छन् । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको कार्यक्रममा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उपस्थित थिए भने ओली कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बिहीबार बिहान आयोजित कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरु सहभागी छन् ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्ध आरम्भ गरेको अवसर पारेर नेकपाले श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरेको हो । तत्कालीन नेकपा एमाले र जनयुद्धको नेतृत्व गरेको माओवादीबीच पार्टी एकता भएर नेकपा गठन भएको हो ।
तत्कालीन माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको अवसर पारेर फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउँदै आएको थियो भयो पार्टी एकतापछि शहीदहरुको स्मृतिमा श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गर्न थालिएको हो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि १० वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध सञ्चालन गरेको थियो । सरकार र माओवादी दुवै पक्षबाट १७ हजार जनाको ज्यान गएको सोही युद्धलाई ‘जनयुद्ध’ भन्ने गरिन्छ । २०६३ मंसिर ५ गते हतियार बिसाउँदै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । तत्कालीन जनयुद्धको बलमा भएको २०६२/६३को जनआन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गरेको थियो । माओवादी बिभाजन भएर वैद्य समूह अलग भएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले भने तत्कालीन नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गरेको थियो । हाल प्रचण्ड एमाले र माओवादी एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अध्यक्ष छन् ।
सर्वाेच्चकाे फैसलाले पूर्ववत अवस्थामा
प्रचण्ड-माधव पक्षको निर्णय संसद
समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ महिला समितिकाे अध्यक्षमा शाक्य
मुख्यमन्त्री राउतले भने-बलात्कार र एसिड आक्रमण गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ
सर्वाेच्चकाे फैसलाले पूर्ववत अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्र
‘तिम्रो हुने कहिले’ नेपाली फिल्म शीर्षक गीत को अफिसियल भिडियो सार्वजनिक
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय (पूर्णपाठसहित)
‘ममाथि खतरा छ, मेरो ज्यान तलमाथि भैहाल्यो भनेपनि कुनै अनौठो नमाने हुन्छ’
‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु हुन्न’